बलात्कारपछि पूर्वसचिव कार्कीपत्नीको हत्या! - Khabar Break | Khabar Break
काठमाडौँको टोखा क्षेत्र सिल
हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विनको क्लिनिकल ट्रायल रोक्ने डब्लुएचओको निर्णय
विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या ५५ लाख ८७ हजार
बलात्कारपछि पूर्वसचिव कार्कीपत्नीको हत्या!
माघ २८ – पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीकी श्रीमती ४९ वर्षीया मुना कार्कीको घरमा काम गर्न राखिएका सहयोगीबाट घरभित्रै हत्या भएको छ।
१२ वर्षदेखि घरेलु कामदार बसेका दाङ लमहीका विजय चौधरीले कार्कीको हत्या गरेको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ । २२ वर्षीय चौधरी पनि सँगै मृत भेटिएका छन् ।
सानेपास्थित कार्की निवासको डाइनिङ हलमा सोमबार बिहान दुवैको शव भेटिएको हो । कार्कीको शव टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको र अनुहार कपालले छोपिएको अवस्थामा थियो ।
चौधरीको घाँटीमा पासो लागेको र डोरी चुँडिएको अवस्थामा थियो । आधा डोरी उनी ढलेको ठीक माथि भर्याङको रेलिङमा झुन्डिएको थियो ।
अनुसन्धानमा संलग्न अपराध अनुसन्धान महाशाखाका एसपी मुकेशकुमार सिंहले कार्कीको हत्या चौधरीले नै गरेको पुष्टि भएको बताए ।
‘हामीले सिसिक्यामेरा फुटेज अध्ययन गयौँ । फुटेज अध्ययन गर्दा कार्कीको हत्या चौधरीले नै गरेको देखिन्छ, कन्फ्युजन हुनुपर्ने अवस्था छैन,’ एसपी सिंहले भने, ‘तर, घटनाको कारण बुझ्न सकिएको छैन । हामी अध्ययन गर्दै छौँ।’
सुरक्षाविद् तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लले आर्थिक, यौन, लागुऔषध र मनोवैज्ञानिक कारण घरेलु कामदारबाटै हत्याका घटना हुने गरेको बताए ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा टेकराज थामीले लेखेको समाचार अनुसार कार्कीको बलात्कारपछि हत्या भएको हुन सक्ने आशंका प्रहरीले गरेको छ।
प्रहरीका अनुसार घटनास्थल मुचुल्काका क्रममा चौधरीको अन्डरवेयरभित्र वीर्यजस्तै देखिने चिप्लो पदार्थ भेटिएको छ । अन्डरवेयरको केही भागमा रगत लागेको पनि देखिएको छ । मृतक कार्कीको मासिक चक्रकै वेला रहेको अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरीले जनाएको छ।
‘चौधरीको अन्डरवेयरमा शंकास्पद वस्तु फेला परेका छन् । तर, परीक्षण हुन सकेको छैन,’ महाशाखाका प्रवक्ता एसपी सिंहले भने, ‘झुन्डिएको मान्छेको शरीरको कुनै अंगबाट तरल पदार्थ निस्किनु स्वाभाविक पनि हुन सक्छ । त्यसैले थप अनुसन्धान आवश्यक छ।’
सिसिक्यामेरा फुटेजमा प्रहरीले जे देख्यो
कार्की निवासमा मूलगेट र भान्छाअगाडि प्यासेजमा सिसिक्यामेरा जडान छ । घटनाको अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई तिनै सिसिक्यामेरा फुटेजले सहज बनायो । प्रहरीका अनुसार बिहान करिब ९ बजे विजय चौधरी घरको मूलगेटमा देखिन्छन् । गेटमा उनले कसैलाई बिदा गरिरहेको देखिन्छ । गेट बन्द गरेर उनी सरासर घरभित्र छिर्छन् । मुना कार्की १०: ०० बजे भान्छामा काम गरिरहेकी देखिन्छिन्।
एकसुरमा काम गरिरहेकी कार्कीको पछाडि चौधरी खल्तीमा हात हाल्दै ओहोरदोहोर गरिरहेका देखिन्छन् । १०: १० बजे चौधरीले कार्कीलाई पछाडिबाट डोरीले घाँटीमा अँठ्याउँछन् ।
करिब १३ मिनेटसम्म भुइँमा दबाएर राख्छन् । त्यसपछि चौधरीले सातपटकसम्म पिर्काले हान्छन् । सिसिक्यामेरामा पिर्का उठाएको देखिए पनि बजारेको भाग देखिँदैन । कार्कीको टाउकोमा रगतको भल बग्ने गरी चोट लागेकाले पिर्काले नै हानेको प्रहरी निष्कर्ष छ ।
कार्कीको मृत्युपछि चौधरी शव छोडेर ११: ०८ बजेसम्म घरभित्रै डुलिरहेका देखिन्छन् । त्यसपछि उनी भर्याङ चढे, रेलिङमा पासो लगाएर झुन्डिए । तर, पासो बलियो नहुँदा चुँडियो । उनी भुइँमा पछारिए । चोटका कारण उनको पनि मृत्यु भयो।
अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सहकुल थापाले घरेलु कामदारबाट उपत्यकामा तीन वर्षमा तीनको हत्या भएको बताए । ‘सानेपासहितको घटना जोड्दा घरेलु कामदारकै कारण दुई वर्षमा तीनजनाको हत्या भएको देखिन्छ । घटना अनुसन्धान गर्दा अधिकांशमा आर्थिक कारण देखिन्छ ।’
सुरक्षाविद् तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लले आर्थिक, यौन, लागुऔषध र मनोवैज्ञानिक कारण घरेलु कामदारबाटै हत्याका घटना हुने गरेको बताए ।
‘घरेलु कामदारबाट हुने हत्या नेपालमा मात्र होइन, भारतमा समेत बढेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछन्,’ उनले भने, ‘आर्थिक, यौन, लागुऔषध र मनोवैज्ञानिक कारण बढी देखिन्छन्।’
नेशनल मेडिकल कलेजको चरम बदमासी,मृत्यु भई अन्त्येष्टि गरिएको सातापछि कोरोना पुष्टि
विवाहको लागि केटीको घर गएका दलित युवालाई मारेर गाउँलेले भेरीमा बगाइदिए
नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने तयारी
कपडा मास्कको भरमा ‘रेडजोन’मा प्रहरी
सिमानामा प्रवासी मजदुरको सागर आइपुग्यो, परीक्षण गर्ने किट आइपुगेन
बन्दाबन्दीमा शैक्षिक क्षेत्र : पर्ख र हेरकाे अवस्था कहिलेसम्म?
अस्पतालले भर्ना नलिँदा कोरोना संक्रमित सात घन्टा एम्बुलेन्समै
अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या १७ लाख ६ हजार